कसका लागि प्रदेश टुक्राउन खोजिएको ? – रायमाझी | Hakahaki
कसका लागि प्रदेश टुक्राउन खोजिएको ? – रायमाझी
१८ मंसिर, बुटवल । पाँच नम्बर प्रदेश टुक्राउन नदिने कार्यक्रममा लाइृ सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीले कसका लागि प्रदेश टुक्राउन खोजिएको ? भन्दै आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् ।
बुटवलको ट्राफिकचोकमा शुक्रबार आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै रायमाझीले आफू पार्टी भन्दा पनि जनताको पक्षमा हिँडेको भन्दै जनता रहेमा मात्र संसद, जनप्रतिनिधि, मन्त्री वा सरकार रहने बताउँदै संविधान संशोधनमा रहेको पाँच नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेरको प्रस्तावलाई सबै दल मिलेर बिफल बनाउने बताए ।
एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जनताका माझ आउन चुनौति दिए ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले प्रदेश नम्बर ५ मा गिद्धे दृष्टि नलगाउन आग्रह गरे ।
सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरुले सीमांकन हेरफेरसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव अस्विकार्य भएको बताए । उनीहरुले सडक, सदन दुबै तताउने र संशोधन प्रस्ताव फेल बनाएरै छाड्ने उदघोष गरे ।